တီဗီအရမျးကွညျ့တာဟာ ကလေးတှအေတှကျ ကောငျးပါသလား? - Chit MayMay
Home Child Care တီဗီအရမျးကွညျ့တာဟာ ကလေးတှအေတှကျ ကောငျးပါသလား?
တီဗီအရမ်းကြည့်တာဟာ ကလေးတွေအတွက် ကောင်းပါသလား?
ကလေးတွေဟာ တီဗီ ကြည့်ရတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ တီဗီကြည့်နေရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ ငနာမငြိမ်တဲ့ ကလေးဖြစ်ပါစေ ငြိမ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ မေမေတို့ကော ကလေးငြိမ်အောင်ဆိုပြီး တီဗီပေးကြည့်တတ်ပါသလား? မေမေတို့ကလေးက တီဗီရှေ့က မခွာနိုင်အောင် တီဗီအရမ်းကြည့်တဲ့သူဖြစ်နေပြီလား? တီဗီအရမ်းကြည့်တာဟာ ကလေးအတွက် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကများနေလို့ မေမေတို့ သတိထားမိစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ Motor skills ဆိုတဲ့ လက်ချောင်းကြွက်သားငယ်လေးတွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုက အရေးပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေဟာ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ကာတွန်းတွေ၊ စီးရီးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ မလှုပ်မယှက်နဲ့ငြိမ်ပြီး စခရင်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အာရုံစိုက်ပြီး ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပြီး အဝလွန်တာတွေ၊ ကိုယ်လက်မကျန်းမာတာတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။ အရမ်းငယ်သေးတဲ့ကလေးတွေဆိုရင် ဦးနှောက်၊ မျက်လုံးထိခိုက်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တီဗီက psychomotor ဖွံ့ဖြိုးမှုကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဆန့်ကျင့်ဘက်အနေနဲ့ တီဗီကြည့်တာဟာ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေးအတွက် ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ တီဗီကို အာရုံစိုက်ကြည့်နေရင် မိဘတွေက ငါ့သားလေး/သမီးလေးက တီဗီကြည့်တာ ဝါသနာပါတယ်လို့ ထင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးတွေဟာ အားကစားနှင့် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခြင်းထက် တီဗီကြည့်တဲ့အချိန်က ပိုများလာကြပါတယ်။
ကလေးတွေအနေနဲ့ ဖန်သားပြင်ရှေ့မှာ အချိန်ဘယ်လောက်ဖြုန်းသင့်သလဲဆိုတာကို ကလေးအထူးကုတွေက ယခုလို အကြံပြုထားပါတယ်။
အသက် ၁၈လအရွယ်အထိ ကလေးငယ်တွေ၊ ဘေဘီလေးတွေကို တီဗီမပြဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
၁၈လကနေ ၂၄လ ကလေးငယ်တွေကို တစ်နေ့မှာ မိနစ်အနည်းငယ်သာ တီဗီကိုစပြီး ပြပေးပါ။
မူကြိုအရွယ်မှာ ပညာရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တွေကို တစ်နေ့လျှင် တစ်နာရီထက်ပိုပြီး မပြသပါနဲ့။ သူတို့ကြည့်နေတဲ့အရာတွေကို နားလည်စေဖို့ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေက ကူညီပေးရပါမယ်။
အသက် ၅နှစ်မှ ၁၂အရွယ်ကလေးတွေ၊ အသက် ၁၃နှစ်မှ ၁၈နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေကို မိဘတွေက တီဗီကြည့်တဲ့အချိန်၊ ဂိမ်းကစားတဲ့အချိန်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတဲ့အချိန်တွေကို တသမတ်တည်း ကန့်သတ်ပေးထားရပါမယ်။
တီဗီအရမ်းကြည့်တာက ကလေးတွေအတွက် ကောင်းသလား?
ကလေးတွေ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ဖွံ့ဖြိုး ကြီးထွားဖို့ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ အဆက်မပြတ် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကစားတာ၊ ပုံဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအရာတွေက သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင် ကမ္ဘာကြီးကို စူးစမ်းရှာဖွေခွင့်ပေးထားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှု အတွေ့အကြုံများမှတဆင့် သူတို့ရဲ့ဘဝမှာ စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ ဉာဏဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ တိုးတတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို သက်ရောက်မှုရှိရင် ကလေးရဲ့ သင်ယူမှုနှင့် ပညာသင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တီဗီကြည့်ရင်း အချိန်အများကြီးဖြုန်းတာဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
တီဗီအရမ်းကြည့်တာက ကလေးတွေအတွက် ဘာ့ကြောင့်မကောင်းတာလဲ?
တစ်ချိန်လုံးတီဗီကြည့်တာဟာ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ၄နာရီထက်ပိုပြီး တီဗီကြည့်တဲ့ကလေးတွေဟာ ပိုပြီး အဝလွန်နိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
ကလေးဟာ တီဗီပေါ်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို မြင်လျှင် သူတို့ဟာ ရန်လိုတဲ့အပြုအမှုတွေ ပိုပြီးပြသနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
တီဗီဇာတ်ကောင်တွေ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်သောက်တာ စတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမှုတွေ မကြာခဏ တွေ့ရတဲ့အခါ ကလေးတွေ အတုယူမှားစေသလို၊ လူမျိုးရေးနှင့် ဂျန်ဒါခွဲခြားမှုအပေါ် ခံယူချက်သဘောထားတွေ အားကောင်းလာစေပါတယ်။
မိဘတွေဟာ ကလေးတွေ တီဗီကြည့်တဲ့အချိန်ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် အစီအစဉ်အမျိုးအစားတွေကို ထိန်းညှိခြင်းဖြင့် တီဗီရဲ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါအကြံပြုချက်တွေက သင့်ကလေးအတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကလေး ကြည့်လို့ သင့်တော်မယ့် အစီအစဉ်တွေကိုသာ ဖွင့်ပေးပါ။ ငြိမ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး တီဗီကို ကြုံရာကျရာ ဖွင့်မပေးထားပါနဲ့။
၂နှစ်ကျော်ကလေးတွေအတွက် တစ်နေ့ကို ၁နာရီ၊ ၂နာရီလောက်သာ တီဗီကြည့်ချိန် ကန့်သတ်ပေးပါ။
သင့်ကလေးနှင့်အတူ တီဗီကြည့်ပေးပြီး ကြည့်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးပေးပါ။
အစီအစဉ်က ကလေးအသက်အရွယ်နှင့် မသင့်တော်ဘူးထင်ရင် တီဗီကို ပိတ်ပါ။
စံနမူနာကောင်းဖြစ်အောင် မိဘအုပ်ထိန်းသူများကလည်း သူတို့ရှေ့မှာ တီဗီအရမ်းမကြည့်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းကဲ့သို့သော တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။
တီဗီကြည့်ခြင်းအစား ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အားပေးပါ။
သင့်ကလေး ထမင်းစားနေရင်း တီဗီကြည့်တာကို ခွင့်မပြုပါနဲ့။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ တီဗီအရမ်းကြည့်တာဟာ ကလေးတွေအတွက် မကောင်းပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ပါစင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အပြုသဘော အားကောင်းလာစေတဲ့ တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ခြင်းကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ သူတို့ကြည့်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်ဟာတော့ အတုယူသင့်တယ်၊ ဘယ်ဟာတော့ အတုမယူသင့်ဘူးဆိုတာ အသိဉာဏ်နှင့် ခွဲခြားတတ်စေဖို့ သင်ပေးရပါမယ်။
Previous articleကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး မာလကာသီးစားခွငျးရဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြား
Next articleသားသားမီးမီးတှအေတှကျ ကနျြးမာစှာ ကိုယျအလေးခြိနျတိုးစတေဲ့ အစားအစာမြား